Nordic Style Indoor LED Wall Lamp များ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်းဝယ်ပါ WoopShop®
Nordic Style အတွင်းပိုင်း LED မီးအိမ်
$46.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $78.99
မီးကာအရောင် B A
မှစ. သင်္ဘောများ ရုရှားပြည်ထောင်စု တရုတ်နိုင်ငံ စပိန်
အရောင်အပူချိန် သုံးပွင့်ဆိုင်မီး ကြားနေအလင်း အဖြူရောင်အလင်း ပူနွေးသောအလင်း
B / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / သုံးရောင်အလင်း B / China / Tricolor အလင်း B / စပိန် / သုံးပွင့်လင်းအလင်း B / စပိန် / ကြားနေအလင်း B / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / ကြားနေအလင်း A / စပိန် / အဖြူရောင်အလင်း A / Russian Federation / White light A / China / White light A / China / Tricolor အလင်း A / Spain / Tricolor အလင်း A / စပိန် / ကြားနေအလင်း A / Russian Federation / ကြားနေအလင်း A / Russian Federation / ပူနွေးသောအလင်း A / China / ကြားနေအလင်း A / China / နွေးထွေးသောအလင်း A / စပိန် / နွေးထွေးသောအလင်း B / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / ပူနွေးသောအလင်း B / China / ကြားနေအလင်း B / တရုတ် / နွေးထွေးသောအလင်း B / စပိန် / နွေးထွေးသောအလင်း B / စပိန် / အဖြူရောင်အလင်း B / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အဖြူရောင်အလင်း A / Russian Federation / Tricolor အလင်း B / တရုတ် / အဖြူရောင်အလင်း
Nordic Style Indoor LED Wall Lamp - B / China / Tricolor light backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
မီးသီးများပါ ၀ င်သည် - မရှိပါ
လျှောက်လွှာ: မီးဖိုချောင်၊ ထမင်းစားခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ်၊ နားခန်း၊ လေ့လာမှု၊ ရေချိုးခန်း၊ အားလပ်ရက်
လက်မှတ်: CCC, CE
Dimmable ဖြစ်ပါသည်: အဘယ်သူမျှမ
base အမျိုးအစား: E27
ပါဝါအရင်းအမြစ်: DC က
Model နံပါတ်: LED Wall Light
စတိုင်: အနုပညာ Deco
ထူးခြားချက်များ - LED Wall Lamps
အလင်းအရင်းအမြစ်အရေအတွက် - ၁
Smart Device သည်
အလင်းအရောင် - အဖြူရောင်အလင်း၊ နွေးထွေးသောအလင်း၊
Switch အမျိုးအစား: ခလုတ်
အရွယ်အစား: အပိုင်း ၃၅ x ၁၈ စင်တီမီတာ၊ ခအပိုင်း ၂၂ x ၂၁ စင်တီမီတာ
LED mode သည်သုံးစွဲမှုနည်းပြီးတောက်ပမှုကိုရရှိစေသည်။
မီးသီးတွေကလှတယ်၊ ငါနွေးထွေးတဲ့အလင်းကိုသာမှာယူခဲ့တယ်၊ အချိန်ကြာပါပြီ
အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေး။ !!!! အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်